Euonymus: nlekọta ụlọ, foto, ọrịa na pests - Mkpụrụ ubi - 2019
Atụmatụ na-elekọta n'ụlọ na n'ọhịa maka osisi mara mma "Eroslet"
Euonymus - Nke a bụ osisi nke na-emeri anya na àgwà ya. Na okike, e nwere ihe dị ka narị abụọ ụdị osisi dị ọkụ.
O meela ka ewu mara ya n'ihi na o nwere ike icho ubi, ma ndị na-ahụ maka nri na-echekarị banyere ịzụlite ya n'ụlọ.
N'okpuru ebe a bụ foto nke ọnụ ụlọ Bereslet:
Euonymus anaghị achọ nlekọta pụrụ iche n'ụlọ. Enwere ike itolite n'ime ime ụlọ, ma ọ bụrụ naanị ọkwa ọkwa. Kwesịrị ịchọta ụdị ihe eji achọ mma, nke ga-adị mma n'ime ụlọ ahụ. Kasị mma maka ụlọ na-eto eto Euonymus Japanese.
Edozi! E nwere Euionmus ndị ọzọ dị iche iche: ụfọdụ nwekwara ike itolite n'ụlọ, ndị ọzọ - na ala na-emeghe. Dịka ọmụmaatụ, Euonymus nke Forchun, Warty Euonymus, European Euonymus, Dwarf Euonymus, na Yonymus Winged.
Ọ bụrụ na i weghaara ụlọ otu osisi sitere na ụlọ ahịa ahụ, nke mgbọrọgwụ ya dị na mkpụrụ ahụ, a na-atụ aro ka ị gbanye ya ozugbo. Ọ bụ osisi shrub ma chọọ ala siri ike, ala dị mma. N'ihi ihe dị mfe, Euonymus adịghị mkpa ọnọdụ pụrụ iche n'oge oge mmegharị.
Usoro ọka na ụlọ na-amalite n'oge okpomọkụihe dị ka ụbọchị mbụ nke June. Ulo Euonymus dị iche iche na-acha odo odo-okooko osisi edo edo, nke a na-agbakọta na iri na ise ma ọ bụ iri atọ. Ụdị okooko osisi ndị ọzọ nwere ike ịbụ odo odo, pink, ọcha na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
AKWỤKWỌ: na ụdị ndị ọzọ, na mgbakwunye na ndị Japan, usoro ogbo nwere ike ịmalite ná mmalite oge opupu ihe ubi.
Ịmepụta okpueze kwesịrị ịdị mgbe niile. Jide n'aka na iwepu ahihia na nke ochie, nke mere na ohia nwere ike ime ka okpueze mara mma.
Maka olu ndị ọzọ, ọ dị mma iji nlezianya wepụ obere ome. A pụrụ imechachaa ya n'ụzọ dịgasị iche iche.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ohia, na-akpụ bọl, ma ọ bụrụ na ịchọrọ okpueze dị elu, kpoo akụkụ nke ala nke akpati ahụ.
Ọ dị mkpa ịtụle na Euonymus nwere ọgwụ ọjọọ nke nwere ike imebi anụ ahụ. Ya mere kwachaa a ghaghi ime ya.
Iji kụọ Euonymus, onye kwesịrị inweta nnukwu ite. Tupu ịzụta tank maka akuku, cheta na ị ghaghị ịgbanwe ya.
Tupu osisi ahụ emee ise, ọ ga-achọ ka a na-atụgharị ya kwa afọ. Mgbe ahụ, enwere ike ịkwaga ya site n'otu tank gaa na onye ọ bụla n'ime afọ abụọ ma ọ bụ atọ.
Ọnọdụ kachasị mkpa maka ịzụlite ihe ịga nke ọma bụ atụmatụ nke mmiri mmiri. Ọ bụ ihe amamihe dị na iji mmiri nke jisiri ike iguzo. N'oge oyi, onye ekwesịghị ikwe ka mmiri mee ka mmiri sie ike, ma na mmiri na ọkọchị, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iji mee ka ọ bụrụ mmiri.
Ọ bụ ezie na ọ na-esiri ike ịchọta ihe eosklet na-eme nke ọma na-adịghị mma, anaghị eleghara usoro ịme ihe anya, karịsịa n'oge ọkụ. Nhazi a bara uru maka igbochi ọdịdị pests na ọrịa.
AKWỤKWỌ: Usoro a dị mma ma ọ bụrụ na a na-eji mmiri ma ọ bụ mmiri dị ọcha, n'ihi na ọ bụrụ na ị na-eleghara ọnọdụ ahụ anya, mwakpo ga-apụta na akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị na-asa mmiri ọkụ n'oge okpomọkụ, echefula iji kpuchie primer na polyethylene.
Usoro ọmụmụ nke Euonymus nwere ike ime na a transplant, na-ekewapụsị mgbọrọgwụ, ma ọ bụ grafting. N'okwu nke abụọ, ịkwesịrị ịkụpụta ihe dị ka mita isii n'ogo n'ala.
Ọ dịghị ezigbo mma usoro nhazi usoro. Akpa, ịkwesịrị ịmepụta oyi na-eme ihe, na-etinye mkpụrụ n'ime ájá ájá ruo ọnwa atọ na ọnwa anọ na nrịgo iri.
Mgbe ahụ, a ghaghị kpochaa mkpụrụ osisi ahụ ma debe ya na ihe efu ruo ọnwa ole na ole. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-akụ mkpụrụ ahụ na ngwọta manganese (gram ise kwa liter).
Ebe na-ebute ala bụ ala nke akụkụ abụọ nke humus na ala ala nwere okpukpu anọ, nakwa akụkụ nke nchịkọta ájá na ájá. A na-eme ka ọdịda nke Euonymus dị omimi ma ọ bụghị ihe na-erughị abụọ centimeters.
Mkpa: ọ bụrụ na ịchọrọ ịkụ osisi Euonymus nke toro site ná mkpụrụ n'èzí, mee ya nanị afọ atọ mgbe ị kụrụ n'ala mbụ.
Ebe kwesịrị ekwesị ga-abụ akụkụ abụọ nke ájá, otu akụkụ nke peat na akụkụ isii nke ala sod. A na-achọkwa akpụkpọ ụkwụ drainage nke brik bido.
A na-achọ enwu ọkụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịmepụta shrub na ìhè nkịtị - jiri artificial. Site na ìhè anyanwụ kpọmkwem, ọ ga-ezo naanị n'etiti ọrụ anyanwụ.
Oge okpomọkụ okpomọkụ kachasị mma bụ ihe dị ka ogo iri abụọ na anọ. N'oge oyi, ọ gaghị ekwe omume bulie irikamakwa belata n'okpuru ogo isii okpomọkụ agaghịkwa ekwe omume.
Mee ka mkpụrụ osisi dị n'ala dị mma na mmiri. Ala mmiri na-adịghị mma. Ọ bụ ihe na-achọsi ike na ala ala dị ala bụ mmiri na-agbapụta n'ụdị ụrọ gbasaa, ala n'onwe ya na-ejikọta ájá, sod na akwukwo ala, yana ájá.
Ọ dị mkpa iji kpụọ okpueze naanị n'oge ọkụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ogige, mepụta akụkụ anọ ma ọ bụ ụdị ọzọ mgbe osisi ahụ rutere n'ogo dị gị mkpa.
Ịgbara kwesịrị ịdị nfe. Mee ka usoro ahụ dị ike n'oge akọrọ.
N'oge opupu ihe ubi, i kwesiri iwepu alaka ndi akpo. N'April na May, e kwesịrị iji nlezianya kpochapụ euonymus n'iji mineral fatịlaịza. A ga-eji sọlfọ dị na colloidal mee ihe dị ka ihe nchebe megide pests na mmiri.
N'oge okpomọkụ, a na-achọ igbochi ọrịa na nje. Ọ dị mkpa iji ụmụ ahụhụ mee ihe.
N'oge mgbụsị akwụkwọ, ọ bụ ihe na-achọsi ike ịpụta okpueze. Euonymus na mgbụsị akwụkwọ ọ na-atụ aro iji nri na ịnweta nri.
N'oge oyi, ọ dị mkpa iji mee ka ala dị ala. Nke a chọrọ sawdust, akọrọ epupụta peat. A ghaghị imepụta maka oyi nke Euonymus naanị maka osisi na-eto eto (ruo afọ atọ). Mkpụrụ akwụkwọ okenye adịghị mkpa nke a.
Akụkụ ndị sitere na mkpụrụ osisi na akwụkwọ akwukwo nke Euonymus achọtawo ngwa na nkà mmụta ọgwụ. Ndị ọkà mmụta ọgwụ na oge ochie na-atụ egwu iji mpaghara ahụ.
Ihe kpatara egwu bụ oke toxicity. Ihe ọṅụṅụ nke osisi ahụ bụ nsi, ọ ga-enwe mmetụta na-adịghị mma ọbụna na-akpakọrịta na akpụkpọ ahụ.
Euonymus na-enwekarị ahụhụ site na pests atọ:
Mpekere na-acha ọbara ọbara. Ọ bụ onye na-eme mkpesa na-abaghị uru akwụkwọ na ọdịdị agba ọcha na ha. Iji nyere onye nnọchiteanya nke osisi ahụ aka ịghọ ụmụ ahụhụ.
Shchitovka. Mgbe o metụsịrị ya, epupụta na-enweta ihe ndị na-acha aja aja, na-acha odo odo ma daa. Ị nwere ike iwepu nje ahụ site n'enyemaka nke ngwọta nke actellic.
Ube na-efe efe Na epupụta na ụdị nke parasaiti a nwere ike ịchọta cobweb. N'otu oge ahụ ha na-agwụ ma na-agbagha. N'okwu a, ngwọta nwere ike inyere aka, nke a ga-ehicha ya na akwukwo.
AKWỤKWỌ: iji zere nsogbu ndị ọzọ, nye nlekọta a chọrọ, ya bụ, tinye anyanwụ ma zere ịṅụ mmiri.
Euonymus - osisi nile. Nke a na shrub kwesịrị ekwesị maka ịme ụlọ ahụ, na ịmepụta ihe ndị dị na ubi. Na-ele nnukwu ogige si Euonymus.
Ọnọdụ isi - họta ụdị kwesịrị ekwesị iji nweta ihe ị chọrọ.
Gold dị ọcha na tomato griin haus - nkọwa nke ụdị tomato dị iche iche "Nne di nne"
Ụdị pears "Belarusian Late": àgwà, agrotechnics
Esi eji aka ha mee ndi na-aṅụ mmanya maka ehi
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Atụmatụ na-elekọta n'ụlọ na n'ọhịa maka osisi mara mma "Eroslet"